WARBIXINADA - SOMALIMEDIA.CO.UK
Home » Archives by category » WARBIXINADA
Mareykanka oo sheegay in uu xoojinayo xiriirka Soomaaliya
Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony Blinken ayaa shacabka iyo Dowladda Soomaaliya ugu hambalyeeyay Munaasabada 1 Luuliyo. “Anigoo ku hadlaya magaca dowladda Mareykanka, waxaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ugu…
M/weyne Xasan Shiikh oo maanta ubax dhigay taalada Daljirka ee Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo xusaya sannad-guurada 62-aad ee xornimada iyo midnimada dalka, ayaa ubax dhigey taalada Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha oo ay wehliyeen Madaxda…
Sawirro: Xildhibaanada Golaha Shacabka oo codka kalsoonida siiyey R/W Xamza
25/06/2022 MUQDISHO (SMN) – Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ayaa codka kalsoonida siiyey ra’iisul wasaaraha cusub Xamza Cabdi Barre. Illaa 220 xildhibaan oo…
Hakad ku yimid horyaalka kubbada cagta iyo khilaaf taagan
Horyaalka Kubbada Cagta ee Soomaaliya ayaa hakad ku yimid, ka dib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay Xiriirka Kubbada Cagta iyo qaar kamid ah Kooxaha ciyaara Horyaalka heerka koowaad…
Carruur nafaqa darro ugu geeriyootay isbitaalka magaalada Kismaayo
In ka badan 30 carruur ah ayaa saacadihii la soo dhaafay nafaqo darro ugu geeriyooday Isbitaalka Magaalada Kismaayo, sida ay noo xaqiijiyeen Maamulka Isbitaalka. Carruurta halkaasi ku geeriyootay…
Qaramada Madoobay oo soo saartay digniin ku saabsan Abaarta iyo Dadka ku barakacay
Hay’adda isku-duwidda gargaarka bani’aadamnimo ee Qaramada Midoobay UNOCHA oo soo saartay Warsaxaafadeed ayaa sheegtay in sii kordhayaan dadka ka barakacaya Abaarta daran ee ka jirta Soomaaliya, isla markaasna loo…
Dagaal u dhaxeeyo Al-Shabaab iyo Ciidamada Dowladda oo ka dhacay Gobolka Sh/Hoose.
Dagaalamayaal katirsan Alshabaab ayaa xalay waxay weerar dhowr jiho waxay ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. Dad deegaanka ayaa warinaya…
Soomali lagu dilay magaalada candhuufa ee galbeedka siti.
Warar laga helayo magaalada candhuufa ee galbeedka siti ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa ku waramaya in halkaasi saacadihii la dhaafay lagu laayay 7 ruux oo xoola dhaqato soomaali ah tiro…
Maxaa kasoo baxay kulankii ay yeesheen Deni iyo ku-xigeenkiisa Karaash?
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni iyo Madaxweyne ku xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo maanta kulan gaar ah ku yeeshay xarunta Madaxtooyada caasimadda Garoowe. Kulankan oo…
Mas’uul caawa lagu dilay magaalada Laascaanood
Koox hubeysan ayaa gordhaw Magaalada Laascaanood ku dishay Maxamed Axmed Aflahaar oo ahaa Guddoomiyahii Xisga UCID ee Gobolka Sool. Goobjoogeyaal ayaa sheegay in dhalinyaro ku hubeysan bastoolado ay…